February 2018 – DigitalTimes.com.mm
FEATURES HUBS Lenovo Mobile & Tablets Mobiles & Tablets Pc & Laptops Pc & Laptops REVIEWS
Lenovo Yoga 730 ကို လေ့လာကြည့်တဲ့အခါ
ဘေးဘောင်မဲ့ မျက်နှာပြင် ဒီဇိုင်းကို စမတ်ဖုန်းများမှာ သာမက လက်တော့များမှာပါ အသုံးပြုလာကြပါတယ်။ Lenovo ကလည်း ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာ Mobile World Congress(MWC) မှာ Laptop…
Huawei HUBS NEWS Pc & Laptops
ဘောင်ပျောက်ဒီဇိုင်းနဲ့ ခေတ်ရှေ့ပြေးပုံစံ MateBook X Pro ကို Huawei မိတ်ဆက်
ဟွာဝေးက ဘာစီလိုနာမှာ ကျင်းပနေတဲ့ Mobile World Congress (MWC) ပွဲမှာ လက်တော့ အသစ်တစ်လုံးကို မိတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ ထူးခြားချက်က အခုခေတ်စားနေတဲ့ ဘောင်ပျောက် စမတ်ဖုန်းများရဲ့…
အတိတ်ကနေလက်ရှိကာလအထိကို တွဲစပ်ရိုက်ကူးထားတဲ့ Nokia ရဲ့ကြည်နူးဖွယ်ရာဗီဒီယိုကြော်ငြာလေး
ကြော်ငြာဗီဒီယိုတွေရိုက်ကူးတဲ့အခါမှာ စိတ်နှလုံးထဲထိ ခံစားချက်ကိုပါထိတဲ့ကြော်ငြာမျိုး ရိုက်နိုင်တဲ့ စမတ်ဖုန်းထုတ်လုပ်သူတွေဆိုတာ တော်တော်တော့နည်းပါတယ်။ သူများတွေကိုတိုက်ခိုက်ချိုးနှိမ်ပြီးမှ နာမည်ကြီးလာတဲ့ကြော်ငြာတွေလည်း ရှိခဲ့ပေမယ့် သူတို့ကလူတွေရဲ့စိတ်ထဲကြာကြာမစွဲနိုင်ပါဘူး။ TV မှာကြော်ငြာခဲ့ဖူးတဲ့ ခုချိန်ထိလည်းအမှတ်ရနေတဲ့ Samsung ရဲ့ငှက်ကုလားအုတ်ကြော်ငြာလိုမျိုးပါပဲ။ (Samsung…
နိုင်ငံတကာ 5G ကွန်ရက်ဝန်ဆောင်မှုအတွက် ပင်မရုံးစိုက်ရာဒေသမှာစတင်မယ့် အူရီဒူး
အူရီဒူးမှ အရှေ့တောင်အာရှဒေသ၊ အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသနှင့် မြောက်အာဖရိက၊ တို့တွင် 5G ပြောင်းလဲဖော်ဆောင်ခြင်းအတွက် ပိုမိုခိုင်မာမှုရရှိစေရန် ကမ္ဘာ့နည်းပညာ ဆန်းသစ်ထီထွင်လုပ်ငန်းဖြစ်သည့် Nokia နှင့် လုပ်ငန်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုသဘောတူညီချက်ကို ပြုလုပ်လိုက်ကြောင်း အူရီဒူးမှ Mobile…
ကြိုးမဲ့အားသွင်းစနစ်ကိုထောက်ပံ့ပေးနိုင်မယ့် Xiaomi Mi 7
Xiaomi ကနေ နောက်ထွက်လာမယ့် Mi7ဖုန်းတွေမှာတော့ ကြိုးမဲ့အားသွင်းစနစ်ပါလာနိုင်ပါတယ်။ ခန့်မှန်းထားသလောက်က စက်တင်ဘာလ ၁၇ရက်နေ့က Wireless Power Consortium မှာ Xiaomi ပါဝင်ခဲ့တာကိုကြည့်ရင်…
Qualcomm က AI ကို ဗဟိုပြုထားတဲ့ Snapdragon 700 Series Chipset များကို ကြေညာ
ဉာဏ်ရည်တု နည်းပညာဟာ အီလက်ထရောနစ် ကမ္ဘာမှာ နေရာယူလာပါပြီ။ Chipset ထုတ်လုပ်သူများဟာလည်း ဉာဏ်ရည်တု နည်းပညာကို ထည့်သွင်းလာကြပါတယ်။ Qualcomm က Snapdragon 800 Series များမှ…
ဈေးကွက်ကိုလွှမ်းမိုးထားနိုင်တဲ့အမိုက်စား DJI ဒရုန်းများ
ရှေ့လာမယ့် အနာဂတ်နည်းပညာကတော့ သိဉာဏ်တုနည်းပညာတွေ machine learning တွေတိုးတက်လာမှာက ကျိန်းသေပါပဲ။ ဒီနည်းပညာတွေက gadget တွေပိုင်းမှာ တော်တော်လေးခေတ်စားလာပေမယ့် တိုးတက်ဖု့ိတော့လိုနေပါသေးတယ်။ ဒါပေမယ့် ခုလက်ရှိအချိန်ထိမှာအကောင်းဆုံးကဘာဖြစ်မလဲ?? သိတဲ့အတိုင်း Drone…
ASUS Mobiles & Tablets NEWS
iPhone X ထက်ပိုသေးတဲ့ notch နဲ့ထွက်ရှိလာတဲ့ Asus Zenfone5နဲ့ 5z
entry –level စမတ်ဖုန်းတွေဖြစ်တဲ့ Zenfone5Lite တွေကိုမိတ်ဆက်အပြီးမှာတော့ Asus ကနေ MWC ပွဲရဲ့အဓိကဖုန်းတွေကိုမိတ်ဆက်လိုက်ပြန်ပါပြီ။ Zenfone5ဖုန်းတွေဖြစ်ပြီး သူ့ထက်ပိုမြင့်တဲ့ Zenfone…
Asus က 18:9 Display , 4000mAh Battery များပါတဲ့ Zenfone Max (M1) ကို ကြေညာ
Asus က MWC 2018 ပွဲမှာ Zenfone Max (M1) စမတ်ဖုန်းကို မိတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။ သူ့မှာ ၅.၅ လက်မ 1440x720p IPS Display…
HUBS Lenovo Mobiles & Tablets NEWS Pc & Laptops
Lenovo က Alexa လက်ထောက်ပါဝင်ပြီး 2-in-1 အသုံးပြုနိုင်မယ့် Yoga 730 ကို မိတ်ဆက်
Lenovo က MWC မှာ လက်ပ်တော့ အသစ်တွေကို မိတ်ဆက်လိုက်ပါပြီ.. အဲဒီအထဲမှာ ထူးခြားတာက Alexa ဒစ်ဂျစ်တယ် ကိုယ်ရေးလက်ထောက်ပါတဲ့ Yoga 730 ဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ…
ကွန်ပြူတာမှာ Virus တွေ့ရင်ဘယ်လို နှိမ်နှင်းပေးမလဲ??
သင့် ကွန်ပြူတာ က Antivirus က Virus တွေ့တယ်လို့သတိပေးရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ သင့်ကွန်ပြူတာ က လေးလံလာပြီး အလုပ်ကောင်းကောင်းမလုပ်တော့ရင်ဖြစ်ဖြစ် ဒီနည်းလမ်းကိုသုံးပြီး Virus တွေကိုရှင်းနိုင်ပါတယ်။ သာမာန် Virus…
Local News Ooredoo
သက်တမ်းအရှည်ဆုံး ဒေတာအပိုလက်ဆောင်ရမယ့် အူရီဒူးရဲ့“ဒေတာလိုက်ပွဲ”
မြန်မာနိုင်ငံတွင် အကျယ်ပြန့်ဆုံးနှင့် လိုင်းအတည်ငြိမ်ဆုံးသော 4G Plus ကွန်ရက်ဖြင့် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ဆောင်မှုများပေးအပ်နေသည့် အူရီဒူးမြန်မာသည် “ဒေတာလိုက်ပွဲ” ဆိုသည့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် အတန်ဆုံး ဒေတာအစီအစဉ်များကို ယနေ့ စတင်မိတ်ဆက်လိုက်ပြီဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းသည်…
မတ်လ ၂၇ရက်နေ့မှာတရုတ်နိုင်ငံကိုတရားဝင်ရောက်ရှိလာတော့မယ့် Xiaomi Mi MIX 2S
အခုဆို တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေမှာ ဘေးဘောင်ပါးပါးဖုန်းတွေမှိုလိုပေါက်ပေါများလာနေပါပြီ။ သူ့ရဲ့ high-end ဖုန်းတွေထဲကတစ်လုံးကိုတော့ MWC 2018 ပွဲမှာမြင်ရဖို့အားလုံးက ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားနေကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တဟုန်ထိုးနာမည်ကြီးလာတဲ့ Xiaomi အနေနဲ့ ဘာစီလိုနာကိုရောက်ခဲ့တာဟာ…
1242×2688 resolution နဲ့ထွက်လာမယ့် 6.5-Inch iPhone X Plus
၂၀၁၈ မှာ Apple က iPhone အသစ်၃လုံးထုတ်မယ်လို့ Bloomberg ကနေ သတင်းရထားပါတယ်။ အရင်တုန်းကကြားခဲ့တဲ့အတိုင်း ဒီအသစ်၃လုံးထဲမှာ ဒီနှစ် iPhone X တွေကိုမြှင့်ထားမယ့် upgrade…
FEATURES Samsung Sony
Sony Xperia XZ2 နဲ့ Samsung Galaxy S9 တို့ရဲ့ specification များကိုနှိုင်းယှဉ်ကြည့်ခြင်း
[Zawgyi] Design Xperia XZ2 —> (6.02 × 2.83 × 0.44 inch), 198 g, Glass body, fingerprint…
တရုတ် စစ်တပ်က Elon Musk ရဲ့ Starlink ဂြိုလ်တုတွေကို ဖျက်ဆီးနိုင်တယ်လို့ ပြော
SD695 နဲ့ 8,340mAh ဘက်ထရီ ပါတဲ့ realme Pad X ကို ကြေညာ
Xiaomi Redmi Note 11T Pro နဲ့ Pro+ ကို ကြေညာပြီ
ဘယ်ဖုန်းမှာမဆို ကြိုးမဲ့အားသွင်းစနစ်ရအောင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ